Fanafihana Dimy Namely An’i Kabul Tamin’ny Herintaona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2018 12:27 GMT
Tranobe rava ao afovoan-tanànan'i Kabul rehefa avy nipoaka teo aminy ny fiara mpamonjy voina iray voasesika baomba. Sary natolotr'i Fatima Faramarz. Nahazoana alalana.
Satria mbola mitohy ny fandroahana mpitady fialokalofana Afghana avy any amin'ny Tandrefana, nivadika haingana ho toerana mahafaty ny renivohitry ny firenena Aziatika atsimo, Kabul.
Tamin'ny volana janoary monja, olona 150 no maty noho ny fanafihan'ny Taliban na vondron'olona eo an-toerana miaraka amin'ny ISIS.
Ny tenirohy #KabulBleeds sy ny #Afghanistanisnotsafe no lasa fahita matetika ao amin'ny media sosialy. Na izany aza, tsy nisy mba nanosika ny governemanta tany Eorôpa hanalefaka ny fomba fijerin'izy ireo momba ny mpitsoa-ponenana kivy mitady làlana ivoahana.
Nanapa-kevitra ny Global Voices fa hijery ny dimy fotsiny tamin'ireo fanafihana nahafatesana olona izay namely ny renivohitr'i Afghan nandritra ny herintaona, ary koa ny fanehoan-kevitr'ireo mponina ao an-tanàna.
1. Fiara mpitondra marary nipoaka tao afovoan-tanàna
Tsy dia nitondra fifaliana tao Kabul, tanàna ahitàna mponina 3 tapitrisa ny taona vaovao. Tamin'ny 27 Janoary, nipoaka tao amin'ny toerana feno olona tao afovoan-tanàna ny fiara mpitondra marary feno baomba, ka nahafaty olona 103 farafahakeliny, ary 235 hafa naratra.
Nilaza fa tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana ireo olon-tsotra ny vondrona Taliban. Tsy fantatra ny fomba nahazoan'ny vondrona ilay fiara mpitondra marary feno baomba.
Taorian'ny fanafihana, nanomboka nanisa ny maty sy nisioka ny mpanao gazety.
Nihoso-drà mahatsiravina i Afghanistan?
Nandritra ny taona lasa, mpitandro ny filaminana teo amin'ny 10.000 no namoy ny ainy, maherin'ny 16.000 no naratra. Tombanana ho tahaka izany ihany koa ny fahavoazana teo amin'ny Taliban, raha tsy mihoatra.
Olon-tsotra teo amin'ny 10 isan'andro kosa no maty (tahiry avy amin'ny Firenena Mikambana, sivy volan'ny taona 2017)
Tao anatin'ny herinandro, fikambanana tsy miankina miasa ho an'ny ankizy, hotelin'olon-tsotra sy olon-tsotra maherin'ny 60 tany Kabul tsy misy governemanta/miaramila lasibatra no notafihan'ny Taliban sy ISIS any Afghanistan. Misy tanjona ankoatra ny fampielezana korontana sy fahazoana lohateny ve eto?
Ity daroka baomba ity no fanafihana faharoa nikendry olon-tsotra tao an-tanàna hatramin'ny taom-baovao.
Nivoaka miaraka amin'ny naoty momba azy ireo sy miaraka amin'ny vaovao ilaina ny mponina sasany tao Kabul mba hanampiana amin'ny famantarana ny vatan'izy raha sendra misy fipoahana.
Mety hitranga amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza ny fipoahana, hoy izy ireo.
Fa tsy isa!
2. Fanafihana hotely raitra mikendry ny ain'ireo vahiny sy ny ao an-toerana
Tamin'ny 20 Janoary, nandrava ny sakana ara-piarovana tao amin'ny Hotely Raitra Intercontinental ireo lehilahy mitam-piadiana ary nitifitra variraraka tamin'ireo vahiny sy ny mpiasa tao amin'ny hotely.
Milaza ny fitantaran'ireo tafavoaka velona fa nandalo efitrano maro tao amin'ny hotely araka izay tratrany ireo mpanafika mba hahabetsaka ny isan'ny maty.
Miantoka ny fahamafisan'ny fitantaram-baovao eo amin'ny fampahalalam-baovao Tandrefana ny hoe vahiny ny 15 tamin'ireo niharam-boina.
Raha atambatra, namono olona 40 farafahakeliny ny fanafihana nataon'ny Taliban.
Naharitra tapak'andro ny fifampitifirana teo amin'ireo lehilahy mitam-piadiana sy ny mpitandro ny filaminana ary nahatohina ireo olona monina ao sy ny manodidina ny iray amin'ireo faritra mirentirenty indrindra ao an-tanàna izany.
Ahoana no iaretan'ny firenena iray ny mafy tokoa, ahoana no tsy itsaharan'ny famonoana olona, ary ahoana no tsy mahaleo mihitsy ireo izay mamono antsika
Anisan'ireo vahiny namoy ny ainy ireo mpiasan'ny zotram-piaramanidina Kam Air, zotram-piaramanidina lehibe indrindra ao Afganistana.
Nisaona ireo mpiasany namoy ny ainy ny zotram-piaramanidina nandritra ny lanonana tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Hamid Karzai – toerana izay iantsonan’ ireo mpitsoa-ponenana Afghana ihany koa rehefa voaraoka avy any Eoropa.
vaky ny fo.
Mihoso-drà indray i Kabul.
Saripika iray milaza tantara an'arivony.
3. Mpanao vy very ny ainy nanapoaka tena mikendry ny moskea Shiita ao Kabul
Tamin'ny Oktobra 2017, nisy mpanao vy very ny ainy nanapoaka tena teo akaikin'ny moskea Shiita ao amin'ny faritra andrefan'i Kabul. Nahafaty olona 56 sy nandratra olona 55 ny fipoahana.
Roa volana latsaka taorian'ny nahafatesan'ny vondrona lehilahy mitam-piadiana iray olona 30 raha kely indrindra nandritra ny fanafihana tao amin'ny moskea Shiita iray any avaratry ny renivohitra ary nandratra 80 hafa.
2.tao anatin'ny herinandro. Mihoso-drà ny fonay
Na dia tsy fantatra aza ny fomba fandaminan'ny ISIS ny fanafihana, nilaza fa tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana roa izy. Malaza amin'ny fankahalany ny Silamo Shiita ny vondrona mahery fihetsika mikambana ao amin'ny Islamo Sonita.
Vondrona izay tena mora iharan'ny fanafihana ny foko Hazara, izay Shiita ny ankamaroany, noho ny finoana mampisaraka lalina eo amin'ny ISIS sy ny Taliban.
Tamin'ny fanafihana mahery vaika indrindra tamin'ny taona 2016, nandripaka vahoaka Hazara nandritra ny fihetsiketsehana milamina hisian'ny feo ara-politika goavana tamin'ny jolay 2016 ireo mpanao vy very ny ainy roa. Nahafatesana mpanao fihetsiketsehana miisa 85 ny fanafihana ary nandratra olona teo amin'ny 300.
Nilaza fa tompon'andraikitra tamin'izany habibiana izany ihany koa ny ISIS.
4. Kamiao feno baomba nipoaka tao amin'ny faritra diplomatika
Ny 31 May 2017, kamiao feno baomba no nipoaka ka namono olona 150 ary nandratra olona 400 teo ho eo. Ity no fanafihana nahafatesana olona be indrindra tany Afghanistan hatramin'ny nandrodanan'ny tafika amerikana ny Taliban tamin'ny taona 2001.
Nitranga tao amin'ny lalana be mpifamoivoy nandritra ny ora fivoahana maraina ny fanafihana. Ao amin'ny “Faritra Maintso” izay misy ny ambasady amerikana, ny biraon'ny OTAN sy ny lapan'ny filoham-pirenena.
Avelao ho sitrana i #Afghanistan! Ny ady sy ny famoizana aina sarobidy no tadiavin'ny fahavalo! Tongava saina
Tsy nisy vondrona nilaza fa tompon'andraikitra tamin'ity fanafihana ity. Saingy nanome tsiny ny Tambajotra Haqqani, antoko Talibana izay miasa indrindra avy any Pakistana ny governemanta Afghana.
5. Fanafihana mitam-piadiana tao amin'ny hopitaly miaramila
Tamin'ny 8 martsa 2017, lehilahy mitam-piadiana nitafy fanamiana mpitsabo no nanafika ny hopitaly miaramila Sardar Mohammad Daud Khan, ka nahafatesana olona 49 sy maratra marobe.
Fanafihana sahisahy hafa tao amin'ny hopitaly miaramila ao #Kabul #Afghanistan
Ny hopitaly miaramila Sardar Mohammad Daud Khan izay mitsabo indrindra ireo mpitandro ny filaminana maratra no hopitaly ampy fitaovana indrindra ao an-tanàna.
Voalohany, nanapoaka tena tao amin'ny vavahadin'ny hopitaly ilay mpanao vy very ny ainy. Avy eo, niditra tao amin'ny tranobe (hopitaly) misy fandriana 400 ireo lehilahy telo mitam-piadiana, ary nitifitra mpitsabo mpanampy, dokotera sy marary. Naharitra ora maromaro ny fitifirana teo amin'ireo mpanafika sy ny tafika manokana Afghana.
Misaona ny fahafatesan'ireo mpitsabo sy marary tamin'ny fanafihana ny hopitaly androany. Tsy mbola nahatsapa alahelo tahaka izany. Mifohaza NUG! Fanafihana ny #HopitalyMiaramila